Kooxda Resistance Band
Ka boodida derin xarig
Bandhig / Dhacdooyin
Siyaasadda “xakamaynta laba jeer ee isticmaalka tamarta” ee dawladda Shiinaha
Waa sidee maalmahan ?? Rajeynayaa in wax walba hagaagaan.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in siyaasaddii “laba -koontaroolka isticmaalka tamarta” ee dawladda Shiinaha ay saamayn gaar ah ku yeelatay awoodda wax -soo -saarka ee qaar ka mid ah shirkadaha wax -soo -saarka, iyo bixinta amarada warshadaha qaarkood waa in dib loo dhigaa, dabcan yogayaga alaabta iyo alaabta isboortiga ayaa waliba saamayn ku yeelan doonta ilaa heer gaar ah.
Intaa waxaa dheer, Wasaaradda Shiinaha ee Deegaanka iyo Deegaanka ayaa soo saartay qabyo-qoraalka “Qorshaha Wax-qabadka Dayrta iyo Jiilaalka ee 2021-2022 ee Maaraynta Sunta Hawada” bisha Sebtember. Dayrtan iyo jiilaalka (laga bilaabo Oktoobar 1, 2021 ilaa Maarso 31, 2022),
awoodda wax -soo -saarka ee warshadaha qaarkood ayaa laga yaabaa in la sii xaddido.
Si loo yareeyo saameynta xannibaadahaan, waxaan ku biirnaa runtii waxaan kugula talineynaa inaad meelmariso amarradaada ku saabsan gogosha yoga, xannibaadda yoga, kooxda caabbinta, kubbadda yoga, sharaabaad yoga, giraangiraha yoga, giraanta pilaties, hula hula hoop ama dalabka qalabka ciyaaraha kale sida ugu dhaqsaha badan suurtogal.
Markaa waxaan horay u diyaarin karnaa agabyada waxaanna diyaarin karnaa gogolka yoga iyo waxyaabaha kale ee yoga si loo hubiyo in amarkaaga lagu bixin karo waqtigii loogu talagalay si loo yareeyo khasaaraha suurtagalka ah ee suurtagalka ah, waxaan u maleynayaa hadda inay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo meheraddaada adiga.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad ogaato in waqtiga dhexdhexaadka ah ay jiraan wax-soo-saarid caalami ah iyo dalabyo suuq weyn, waxaan rajaynaynaa inaan si fiican u wada shaqayn karno oo aan u wada shaqayn karno si aan fursaddan u helno, rajadu waxay geli kartaa xiriir ganacsi oo muddo dheer socda. amarrada bishaan sababtoo ah xaaladdan ayaa sababi karta dib u dhac 3-6 bilood ah sidii hore, waa maxay aragtidaada?
Haddii aad qabtid wax su'aalo dheeraad ah fadlan xor u noqo inaad la xiriirto Jointop waqti kasta!
Fadlan ka taxaddar muddadan gaarka ah iyo dhammaan barakooyinka adiga iyo kuwaaga.
No.18, Wadada Baihuazhou, Deegaanka Warshadaha Pushang, JinShan, Magaalada FuZhou, Gobolka FuJian, Shiinaha, 350008
Nbr Yoga Mat , Non Slip Yoga Mat , Pu Yoga Mat , Tpe Yoga Mat , PCV Yoga Mat, Mareynkanka ayaa beddelay calalkiisii madaxa ,